Landa i-Edgley Optica FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 19.1 MB
Play 15 524
Umbhali: Craig Richardson
Isengezo somdabu se- FSX/P3D zekhwalithi enhle futhi empeleni eyangempela, engenaphutha ye-3D.
I Optica, yakhelwe nguJohane Edgley futhi lakhiwa Brooklands Aerospace, wavelelwa into ukumisa engavamile nge endlwaneni eyakhiwe ezicwebezelisiwe ngokugcwele phambili Lithatha ezintathu ngaphesheya, asikhumbuza helicopter Alouette. Behind it wawakhiwe a Lycoming flat nesithupha injini powering fan ducted, twin boom cantilever tailplane nge umkhumbi twin kanye ikheshi high-agibele amahhashi single. I amathathu fixed ibhanoyi wayenamandla nosewheel nge-offset ngakwesokhohlo. Amaphiko ngamashumi unswept kanye untapered, kanti izindiza kwase sasivumela standard ukwakhiwa wonke-metal ne wagcizelela aluminium isikhumba. ukubukeka Indiza sika olwehlukanisa ekutheni eyaziwa ngokuthi i- "bug-iso" kweminye imibiko athandwayo.
Abagibeli 2: Umthamo
Ubude: 8.15 m (26 ft 9 e)
Namaphiko: 12.0 m (39 ft 4 e)
Ukuphakama: 2.31 m (7 ft 7 e)
Wing ndawo: 15.8 m² (171 ft²)
isisindo Empty: 948 kg (2,090 LB)
umthwalo ewusizo: 367 kg (810 LB)
Max. ukusuka isisindo: 1,315 kg (2,900 LB)
Powerplant: 1 × Textron Lycoming IO-540-V4A5D flat eziyisithupha piston engine,
Ophephela: ezinhlanu bladed ducted fan bendiza, 1 injini per
I-Aerospace Jetstream 31 / 32 yaseBrithani FSX
I-Zlin Z137T Turbocmelak FSX & P3D & FS2004